चिनियाँ अक्सिजन सिलिण्डर घरमा थुपारेको आरोप खेप्ने सांसद को हुन् ? – Action Media
२ जेठ, काठमाडौं । चीनले अनुदानमा दिएको अक्सिजन सिलिण्डरका केही थान सांसदको घरमा भेटिएको भन्दै सामाजिक सन्जालमा पोष्ट गरिएको एक भिडियो अहिले भाइरल छ । भिडियोमा निलो रंगका सिलिण्डरहरु भुइँतलाको भर्‍याङसँगै राखिएको देखिन्छ ।
एक व्यक्ति भन्छन्, ‘सिलिण्डर देखियो घरमा लुकाएर राखेको छ ।’
अर्का व्यक्तिको आवाज सुनिन्छ– को छ यो घरमा ? यो सिलिण्डर कसको हो ?
‘यो त चाइना सरकारले दिएको, माननीय सांसदले ल्याएको रहेछ,’ अलि झर्किएको भावमा अर्का व्यक्ति भन्छन्, ‘यो त चाइना सरकारले दिएको सिलिण्डर होइन र ?’
Prevकोरोना संक्रमणबाट थप १८७ जनाको मृत्यु, ८,१६७ संक्रमित थपिएकोरोना संक्रमणबाट थप १८७ जनाको मृत्यु, ८,१६७ संक्रमित थपिए
Nextदुवै डोज खोप लगाएपछि मास्कबाट मुक्ति ! यस्तो छ, वैज्ञानिक कारण